ikhaya » Okufumaneka » Ukukhanyisa iMic Guff idibanisa ukuKhula kunye neMingeni yeNtsebenzo kunye neeNkqubo eziPhambili
Ukukhanyisa iMic Guff idibanisa ukuKhula kunye neMingeni yeNtsebenzo kunye neeNkqubo eziPhambili
Ukuhanjiswa kwe-2017 NAB
Abaphulaphuli beCinema baye bawa thandana namafilimu aphilileyo, okubangelwa iimfuno eziphezulu kwii-studio zefilimu ze-IT kunye neziphumo zokuvelisa. Xa i-Illumination Entertainment yaqalisa ukusebenza kwiifrimu ze-animated kwi-2004, ivelise enye yefilimu ebonakalayo ngonyaka. I-studio ye-animated studio ye-Paris,Ukukhanyisa iMic Guff, Iimfuno zabaphulaphuli eziphezulu zibhekiselele kwishedyuli yokuvelisa i-2016 yeefilimu ezine.
Eyaziwayo ngeentsimbi ezifanaAndikholelekiyayeUbomi Bokufihlakeleyo bezilwanyana zasekhaya, Iqela le-Macum ye-Illuminated Mac Guff lidala izicwangciso eziyinkimbinkimbi kwinqanaba-ngesakhelo, ukuqesha izakhono zabo ukwakha ukulandelelana kweVFX. Nakuphi na ukulibaziseka ukuba amava oomculi ekuvuleni ifayile, nokuba loo yesiqingatha sesibini, iyakhathazeka kunye nokuphazamiseka okungakhokelela kwiphutha okanye ukungaphumeleli. Ukuvula rhoqo kunye nokugcinwa kwamafayile kunye neefayile zokufakela ngabaculi kunye nokunikezela kweendawo ezisemaphandleni iimfuno ezinzulu kwiimpahla zokugcina ezixhasa ukukhanya okungaqhelekanga kwe-Illumination Mac Guff. Ukuhlanganiswa kwezi mfuno kunye neshedyuli yokuvelisa ngokukrakra kwenzelwe i-IT enkulu ekukhuseleni phambili, ngokukodwa kwisiseko sayo sokugcina-esicwangciselwe ngempumelelo kwiminyaka emihlanu edlulileyo kunye nezisombululo ezivelaIinkqubo ezintle.
Xa le studio yayisebenza kwizinto ezintle ezifanaAndikholelekiyayeLorax, Ukukhanya kweMic Guff kuqala kwaqaphela ukuba kuyadingeka ukulungisa ukukhutshwa phakathi kwenani lezitshukumo kwinethiwekhi yalo yokugcina, umthamo womsebenzi kunye nokusebenza jikelele. Inkalo yayo ye-HDS yayiza ngaphantsi kobunzima obukhulu, kunye nendlela yokuthenga i-hardware entsha yokugcinwa kwezinto eziphezulu zokugcina iidiski zokugcina izithuba zafikelela ekupheleni. Ukulungisa ingxaki, bajika kwiifayile ze-AXT ze-FXT Edge Series.
"Sasivalelwa ukuba iifayile zeFXT Edge Series ziza kusombulula ngokukhawuleza ingxaki ye-I / O ngaphandle kokungenisa izicathulo ezingaphezulu. Injongo ephambili-ukukhusela abaculi-baya kufezekiswa ngokukhawuleza, "kusho uBruno Mahe, intloko ye-teknoloji kwi-Illumination Mac Guff. "Kwakuyikhono lika-Avere lokubonelela ngexesha langempela, uhlalutyo olubonakalayo olubonisa apho idatha eshushu ifumaneka kwinkqubo yokugcina yonke into eyayihlaba umxhwele i studio. Ngaphambi kokuvavanya, sasingazi ukuba kuya kuba luncedo olukhulu kwimveliso, kodwa kwakungomnye wezinto ezifake uphawu lo mbhalo. "
Ukukhanyisa iMic Guff nayo yayifuna isisombululo se-agnostic, ekuqinisekiseni ukuba iyanelisa iimfuno zokuvelisa ngexesha elizayo ngaphandle kokuvalelwa kumvelisi omnye wezinto ze-hardware-enye inzuzo yobuchwepheshe be-Avere.
Emva kokuba ukufakela kuqedile, inkqubo yaziswa kwi-intanethi kwaye kwakukho utshintsho olukhawulezayo nolushukumisayo. Ngaphambi kokuba iifayile eziphezulu zeFXT Edge zisetyenziswe, izibane ezininzi ezikhanyayo ezibonisa ukusetyenziswa kwediski ebonakalayo kubonakala kwii-HDS. Kodwa emva koko, ngokukhawuleza kukhanyeka ukukhanya, kuba i-I / O eninzi yatshitshiswa kwiNkqubo ephezulu. "I-Avere iye yanceda ukuxilonga apho iimeko zibekwe kwisiseko sethu sokugcina: ingaba sasisetekweni lokugcina, kwinethiwekhi okanye kwenye indawo," uqhubeka uMahe.
Ngaphambi kokufakela iifayile ze-Avere FXT Edge, i-Illumination Mac Guff yayinqatshelwe ingxaki yokuxhunywa kwenethiwekhi ngexhobo ze-HDS. U-Mahe ukhumbula ukuba akukho ndlela yokuzihlukanisa inxalenye ebalulekileyo yenethiwekhi ukuphanda ingxaki ngaphandle kokuphazamisa umsebenzi. Endaweni yoko, ukuxilongwa kunye nesisombululo kuthatha iiveki ezimbini kwaye kubandakanyeka ukwakha "i-sandbox" ukuvelisa ingxaki. I-sandbox ivunyelwe ukufikelela ekuqhutyeni kwedatha ngaphandle kokuphazamisa iinkqubo zemihla ngemihla. "Ukuba sasibe ne-Avere kunye nezixhobo zayo zokuhlalutya ngelo xesha, ingxaki yeveki ezimbini yayiza kusombulula ngemizuzu emibini ngokujonga nje i-GUI," watsho.
Kwiimeko eziphambi kwexesha elifanelekileyo, rhoqo xa iidiski zendawo yokugcina izithuthi zifikeleleka, amandla amashishini okugcina amashishini aphezulu afuneka athengwe kwaye ibhalansi phakathi kwee-SAS eziqhubayo kunye needkski ezisondeleyo zokugcina izinto ezifunekayo ukuze zilungiswe. Kodwa ukulayisha i-I / O kwi-disk system ukuya kwiifayile ze-FXT Edge kubangele ukugcinwa okubalulekileyo, kokubili ngokukhusela ukuphuculwa rhoqo kwindlela yokugcina kunye nokunika uMa isikhundla esinamandla, esiqhubekayo sokuthintana nanini na ukugcinwa okongeziweyo. "Xa sisebenzisana nabathengisi bezinto ze-hardware sisesimweni esingcono kakhulu kuba kusadingeki sikhathalele malunga nokwenziwa kwemilinganiselo yeendlela ezahlukeneyo zokugcina idiski," watsho.
Ngokubanzi, uMahe uthi akayi kuphinda abuyele kwinkqubo endala yokongeza iidiski ezongezelelweyo kwinkqubo yokugcina yendabuko ukwenzela ukulinganisa ukusebenza, ayiyi kusebenza kwaye iindleko ezingavumelekanga. Ukukhanyisa iMic Guff ngoku inendawo yokusebenza evumelana nabo bonke abadlali, kunye nokukwazi ukubona yonke into eyenzekayo ngaphakathi kwendawo yokugcina ngokusebenzisa amandla okuhlaziya Iinkqubo ezintle.
Ukuphucula ukusebenza kweefayili ze-Avere FXT Edge kunye nokukwazi ukubeka iliso rhoqo nokulungelelanisa ukuhamba ngokusebenzisa izixhobo zokuhlalutya ezibonakalayo kuye kwabangela ukwanda okwenyuka kwe-Illumination Mac Guff ngenkunkuma encinane.
Ukususela kwi-2010, umgangatho womfanekiso weefilimu eziphambili ziphuculwe ngumbandela wesine-owodwa, kunye neshedyuli enkulu yokuvelisa, iye yandise imfuno kwiziko lokugcinwa kwe-Illumination Mac Guff nangaphezulu. Ngenxa yoko, i-Illumination Mac Guff ihlaziywa kwiifayile zeFXT Edge zakutshanje kwaye zikhawuleza ukuqinisekisa ukuphumelela kwayo.
Isisombululo esisisisombululo sithatha yonke imiba enokubakho kwi-equation; Iifayile zayo zeFXT Edge zinokuthi zenzelwe ngokukhethekileyo kuthi. Isisombululo sethu sisisombululo-sokuzikhethela kwi-2012 kwaye sihlala sisisombululo-esinokuzikhethela namhlanje, "kusho uMahe.
UGretchen Weaver nguMphathi weDajethi yeDrama Iinkqubo ezintle Apho ejongene nokudalwa kwimixholo yewebhusayithi yenkampani, amaphepha amaphepha amhlophe kunye nee-webinars zemfundo. Uyinxalenye ebalulekileyo yeqela elinobuchule, iinkampani ezidibeneyo ngolwazi, imfundo kunye noncedo lwabantu ngabanye ngamaqela okuthengisa kunye neenjineli. I-Gretchen idonsa kwiminyaka eyi-20 yamava kwiphuhliso loshishino kunye nokuthengiswa ngolwazi olubanzi kwi-teknoloji yezobugcisa kunye nokuthengiswa kwe-B2B. UGretchen uphethe iMasters yobuGcisa kwiNkampani yoNxibelelwano evela kwiYunivesithi yaseDuquesne kunye neCachelor yeScience kwiNtengiso evela e-Indiana University yasePennsylvania.
Inkundla ye-Ultra HD ndiphila	2017-05-20
Previous: Injini yokuThuthukisa iNjineli
next: Ukugcinwa okuManyeneyo kulula ukusetyenziswa kweeV18 ezinamandla ene-VN 360 °
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Ukukhanyisa iMic Guff idibanisa ukuKhula kunye neMingeni yeNtsebenzo ngeNkqubo eziPhambili". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/illumination-mac-guff-meets-growth-and-performance-challenges-with-avere-systems-2/. Enkosi.